C C W ” wixii dhacay 14 October ma eheyn Musiibo Qaran” | XAL DOON
Home NEWS C C W ” wixii dhacay 14 October ma eheyn Musiibo Qaran”
C C W ” wixii dhacay 14 October ma eheyn Musiibo Qaran”
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir C/raxmaan C/Shakuur Warsame, ayaa qoraal dheer oo xog badan xanbaarsan ka sameeyay xasuuqii dhacay 14kii October sanadkii 2017, xiligaas oo isgiyska Zoobe lagu dikay dad 1,000 ruux gaaraya.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir:
Seddax sano ka hor maanta oo kale 14 Oktoobar 2017, waxay aheyd maalin murugo iyo ma hadho ku reebtay taariikhda dalkeenna. Sanadka 2017-ka wuxuu ahaa sanadkii ugu xumaa ee dalkeenna soo mara. Sababtoo ah bishii Agoosto ee sanadkaas ayuu hoggaanka dalkeennu Qalbidhagax Itoobiya u gacan geliyey, ONLF argagexiso ku suntay, Bishii Oktoobar waxaa dhacay xasuuqii Soobbe iyo weerarkii Hoteel Naasa Hablood, iyadoo bishii Deseembar ee isla sanadkaa ay Dowladdu weerartay Xarunta Xisbiga Wadajir.
Xasuuqii Soobbe wuxuu ahaa kan ugu murugada iyo xanuunka badan, sababtoo ah ku dhowaad kun ruux ayaa maalin qur ah ku shahiidday, halka kun ka badanna ay ku dhaawacantay, hanti maalaayiin ahna ku bur-burtay, tiiraanyo iyo raad maskaxeed tabanna ku reebtay ehelladii iyo asxaabtii dadkii la laayey iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxay ahayd 11-ka Sibteenbar-tii Soomaaliya.
Ma aheyn “Masiibo Qaran”, sida ay dad badani u dhigaan, sababtoo ah masiibadu waa waxa si dabiici ah u dhaca sida; fatahaad, duufaan, abaar, dhul-gariirka IWM. Wixii nagu dhacay 14 Oktoobar ee sanadkii 2017 waxay ahaayeen “Xasuuq” ay gaysteen cadow ku soo duulay shacabka Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed waxey ku seexdeen oo ay isku haleeyeen dowladdooda in ay aragagexisada ka difaacdo, waxay kaloo filayeen in dawladu cadawga soo weeray uga aargudo.
Seddax sano kaddib, shacabku ma helin tillaab looga aargutay raggii xasuuqa geystay. Haddii reer lagu soo duulo oo dad laga laayo, hantina laga burburiyo, tacsi ma dhigtaan ee intay maydka aastaan ayey aargutaan.
Shacabka Soomaaliyeed waxay hogaankooda ka filayeen in uu abaabulo oo cududdooda isku duwo, ciilkii iyo caradii ay qabeena awood ay cadawga ka aargutaan loo rogo. Taa bedelkeeda hoggaanka dowladda waxay duulaan ku qaadeen siyaasiintii iyo maamulladii Gobollada ee safka dagaalka la geli lahaa, taamartoodii waxay ku dhameeyeen, hadba in ay guri siyaasi weeraraan, madaxweyne dowlad Goboleed ridaan, guddoomiye baarlamaan xil ka tuuraan, ugu danbaybtiina iyagii is fiijiyaan.
Xanuunka iyo tiiraanyadii xasuustii xasuuqa 14 Oktoobar weli waa ay taagantahay, waxaana looga fadhiyaa hoggaanka bedeli doona kan haatan jira in uu shacabka uga aargudo cadawga aragagexisada ah, kuna xajiya xusuusta shacabka maalinta madow ee ma hadhada leh.